မိုးကောင်းသား: သြဓိသမေတ္တာ ပွားများနည်း၊ အနောဓိသ မေတ္တာပွားများနည်း။
မေတ္တာဆိုတာ “သူတပါးတို့၏, သတ္တ၀ါတိုင်း၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းကြီးထွားမှုကို လိုလားတောင့်တနေမှုဟာ မေတ္တာပဲ” အဲဒီတရားကို ပွားများနေလျှင် စင်ကြယ် မွန်မြတ်သော နေခြင်းဖြစ်၍ ဗြဟ္မ၀ိဟာရ- ဗြဟ္မာတို့၏ နေခြင်း အကျင့်တရားမို့ ယင်းကို ဗြဟ္မစိုရ်တရားလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်၊
(၁) သြဓိသမေတ္တာ။ ။ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါကို တစ်ပါးချင်း တစ်မျိုးချင်း ပိုင်းခြား ပိုင်းခြားကာ ပွားများပို့သသော မေတ္တာမျိုး၊ သြဓိ သဒ္ဒါက အပိုင်းအခြား ပိုင်းခြားခြင်းကို ဟောတယ်။
ကိုယ်ပို့သချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို၊ သို့မဟုတ် တမျိုးမျိုးကို စိတ်ညွတ်ရည်မှန်းပြီးတော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမည်ကို ခေါ်ဆိုကာ အဟုတ်တကယ်ချမ်းသာ လိုလားစေချင်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ မိမိရဲ့စိတ်ကို ထိုသူထံသို့ စေလွှတ်ပြီး။ ။ ပုံပမာ….
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်တကွ မင်းမှုထမ်းများအပေါင်းတွေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။
မိန်းမများ အပေါင်းတွေ။ ယောက်ျားများ အပေါင်းတွေ။
အရိယာများ အပေါင်းတွေ။ ပုထုဇဉ်များ အပေါင်းတွေ။
နတ်များ အပေါင်းတွေ။ လူများ အပေါင်းတွေ။
ပြိတ္တာများ အပေါင်းတွေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေလို့ စိတ်ညွတ်ပွားများနေရမယ်။
အဲဒီလိုမျိုးတူ ဇာတ်တူ အလုပ်တူတို့ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ် သီးခြားဖော်ထုတ်ကာ မေတ္တာပွားနိုင်တယ်၊ တယောက်ချင်း တဦးချင်း အတွက်ကိုလည်း သူ့အမည်ကို ခေါ်ဆိုပြီးတော့ မေတ္တာပို့နိုင်တယ်။ ပုံပမာ….
ဦးဖြူ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာပါစေ။
ဒေါ်မဲ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာပါစေ။
အဲဒီအတိုင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ခေါ်ဆိုရည်မှန်း စိတ်ညွတ်တန်းပြီးတော့ တိုးတိုးသာသာ နှုတ်နဲ့ ရွတ်ဆို ရွတ်ဆိုကာ ကြိမ်ဖန်များစွာ သိန်း သန်း ကုဋေ ပို့သ စီးဖြန်း ပွားများကာ နေရမှာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီမေတ္တာက ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတူချင်း သို့မဟုတ် တဦးချင်း သတ္တ၀ါအနန္တထဲမှ ပိုင်းခြားခွဲထုတ်ကာ သီးခြားပို့သ ပွားများတဲ့ မေတ္တာမျိုးဖြစ်လို့ ယင်းကို သြဓိသမေတ္တာလို့ ခေါ်ဆိုတယ်၊ ကဲ…အဲဒါဟာ လူတိုင်းနားလည်စွာနဲ့ ပို့သ ပွားများတတ်အောင် ပြပေးတဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်းပဲ၊ နောက်တမျိုးက…
(၂) အနောဓိသမေတ္တာ။ ။ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ အမျိုးအမည်ကို ပိုင်းခြား ခွဲထုတ်ခြင်း မပြုတော့ဘဲ ရှိသမျှ သတ္တ၀ါတွေ အကုန်လုံးသိမ်းကျုံးကာ ခေါ်ဆို ပို့သ ပွားများတဲ့ မေတ္တာမျိုးကို ခေါ်ဆိုတယ်။
ယင်းကိုပင် ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော်က- သဗ္ဗေသတ္တာ၊ သဗ္ဗေပါဏာ၊ သဗ္ဗေဘူတာ၊ သဗ္ဗေ ပုဂ္ဂလာ၊ သဗ္ဗေ အတ္တ ဘာဝ ပရိယာ ပန္နာ ဟု အမျိုးငါးပါးနဲ့ ပြဆိုထားတယ်၊ အဲဒီ ငါးပါးထဲက တပါးပါးနဲ့ ခေါ်ဆို လိုက်ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှသတ္တ၀ါတွေ အကုန်ပါသွားတာပါပဲ၊ ဒါ့ကြောင့် အနောဓိသ မေတ္တာကို ဟောသည်လို လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ ခေါ်ဆို ပွားများ ပို့သရမယ်။
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ အပေါင်းတွေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။
အဲဒီအတိုင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ တည်နေကြတဲ့ ဗြဟ္မာကြီးတွေက စပြီးတော့ မမြင်ရတဲ့ ပိုးမွှားကလေးတွေအထိ ရှိရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါတွေကို အာရုံပြု ရည်မှန်းပြီးတော့ အဟုတ်တကယ် ချမ်းသာစေလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သိန်းသန်းကုဋေ အကြိမ်များစွာ ပွားများကာ နေရမယ်။
ကိုင်း…ခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မေတ္တာပွားသူမှာ ရှေးဦးစွာ သိထားရမည့် အင်္ဂါ ၁၅ ပါးနဲ့ ပြည့်စုံစွာ အဲဒီ မေတ္တာပို့နည်း နှစ်ပါးနဲ့ ပွားများ ပို့သကာသာ နေပါ၊ မေတ္တာအပို့ခံရသူတွေအတွက် မုချအကျိုးစီးပွားရရှိခံစားရမှာ သေချာပါတယ်၊ ကဲ…အဲဒါမေတ္တာ ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းပုံ အလွယ်ဆုံး နည်းနှစ်နည်းပါပဲ။
ဒကာ။ ။ သည်လို အပြည့်အစုံ ဖြေကြား သင်ပြပေးတဲ့အတွက် မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများ အားထုတ် တတ်ပါပြီ ဆရာတော်၊ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ရှိခိုးပါတယ် ဘုရား။
ဣတိ သုတေသန သမ္မာမဂ္ဂင်္ဂပဥှာ နိဋ္ဌိတာ